Sidee loo hubiyaa fadhiyada koontadaada Twitter? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 11, 2021 0 comments 397
Macluumaadka laxiriira xisaabaha koontadaada ayaa aad muhiim ugu ah ilaalinta amnigaaga barxada. Iyadoo loo marayo kormeer joogto ah hawshan, waxaad dammaanad ka qaadi doontaa lama taabtaannimada magacaaga iyo isgarad-furahaaga iyo keydinta dhammaan macluumaadka qarsoodiga ah ee aad halkaas ku hayso.
Waana in, waqti kasta, aad u dhibtoodaan weerarka hackers ama xatooyo aqoonsi ujeeddooyin kala duwan oo soo saari kara cawaaqib sharci, markaa waa inaad si weyn uga taxadarto amniga astaantaada.
Kulamadii aad ku sameysay koontadaada Twitter Waxaad ka hubin kartaa dejinta koontadaada:
Meel ku taal "Amniga iyo marin u helka koontada"
Si aad u bilawdo, waa inaad heshaa qaybta "goobaha iyo asturnaanta". Tan waxaa laga heli karaa adiga oo ku jira sawirkaaga bogga ee App-ka, ama adoo galaya "xulashooyin dheeri ah" bogga Twitter-ka.
Gudaha dejinta iyo asturnaanta, waxaad sidoo kale ka heli doontaa qaybta "Amniga iyo helitaanka koontada." Markaad gasho, waxaad arki doontaa ikhtiyaarrada "amniga" iyo "Codsiyada iyo kalfadhiyada". Gali xulashada labaad. Halkan waxaad kuheli doontaa afar qaybood:
Barnaamijyada ku xiran: Halkan waxaad ka heli doontaa codsiyada aad ku xirtay akoonkaaga Twitter waqtigaas. Haddii aad leedahay codsi ku xiran, ku soo gal dhex-galkan. Waad ka akhrisan kartaa waxa arjigu ku saabsan yahay, boggiisa rasmiga ah iyo rukhsadaha uu codsigu ku haysto koontadaada.
Oggolaanshahaan waxaa ka mid ah: akhri oo qor oo marin u hel adiga Cinwaanka emailka. Waxa kale oo aad heli doontaa taariikhda saxda ah ee marinka loo oggolaaday.
Qeybta hoose ee qaybtaan waxaad ka heli doontaa "ka noqo marinka" lagu calaamadeeyay casaanka, oo aad riixi karto wakhti kasta si aad uga saarto marinka codsigan koontadaada.
Kal-fadhiyo: Qeybtaan waxaad ka heli doontaa sharaxaadda aaladaha aad ku isticmaaleyso koontadaada Twitter, iyo sidoo kale fadhiyada koontadaada ee firfircoon. Booska qaybtan waxaa loo qaybin doonaa laba qaybood:
"Fadhiga hadda socda": halkan waxay ku tusi doontaa fadhiga halka aad kala tashato akoonkaaga xilligan, oo leh nooca qalabka iyo cinwaankiisa.
"Xidho kalfadhiyada kale": Halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan kal-fadhiyadii aad bilowday mar uun. Waxay kuu sheegi doontaa haddii aad leedahay fadhiyo firfircoon oo aadan isticmaalin
Waxaad ka heli doontaa qaybta dambe oo lagu muujiyey casaanka ereyada "Xidho dhamaan kalfadhiyada kale" si aad u tirtirto dhammaan kuwa firfircoon. Haddii aad go'aansato inaad riixdo, nidaamka ayaa ku weydiin doona haddii aad rabto inaad xaqiijiso hannaanka lagu dhammaystirayo xiritaanka.
"Taariikhda helitaanka koontada": Iyada oo loo marayo shaqadan waxaad awoodi doontaa inaad ku ogaato haddii ay jiraan wax dhaqdhaqaaqyo shaki leh oo ku jira meheradaha codsiyada aad ku xirtay koontadaada Twitter.
Liiska isku xirnaanta ee arjiga lagu sameeyey koontadaada ayaa ka muuqan doona taariikhdooda iyo cinwaanka IP-ga.
"Qalabka iyo codsiyada soo galay": Halkan waxaad ka heli kartaa biraawsarayaasha, aaladaha iyo cinwaanada emaylka ee ay Twitter u adeegsato inay ku gaaryeelaan khibrada isticmaale ee websaydhka madal
Sidee loo keydiyaa xogta Twitter?